Wararka Wargeyska OGAAL, Axad: “Faransiiska inaynu wax kala iibsanaa waa daruuri laakiin maalin kaliya wax laguma kala iibsado” | Somaliland.Org
September 29, 2008	Hargeysa (Ogaal) – Madaxweynaha Somaliland Daahir Rayaale Kaahin iyo Wefti uu hogaaminayo ayaa shalay galinkii dambe dalka ku soo laabtay, ka dib markii ay soo dhamaysteen safar ay ku soo mareen wadamo dhawr ah oo ka mid ah qaarada Yurub.
Somalia: Maraykanka oo looga shakiyay inuu ku lug leeyahay afduubka maraakiibta
Nairobi (AP/Ogaal)- Qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyay Markab ay ku rarnaayeen 33 Taangi oo kuwa dagaalka ah, Madaafiic, Rasaas iyo Saanad kale oo Milatari oo budhcad-badeed Soomaaliyi afduub ku qabsadeen Khamiistii. Isla markaana Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Males Zenawi ayaa walaac ka muujiyay markabkaa hubka siday ee gacanta u galay budhcad-badeeda Soomaaliya.
Budhcad-badeedan Soomaalida ah ayaa ku dhawaaqay inay markabkaas oo la sheegay inuu u rarnaa Kenya fasaxayaan hadii ay helaan lacag dhan 35 Milyan oo Dollar oo madax-furasho ah. Dalalka ka hadlay arrintan oo aragtiyahoodu isku dhaw-dhaw yihiin ayaa ka digay tallaabo millatari oo reer galbeedku isku dayaan inay ka qaadaan haysashada markabkaas. Sida lagu faafiyay shabakadda wararka AP, Markab kuwa dagaalka ah oo Maraykanku leeyahay ayaa aad ugu dhawaaday markabka la afduubay ee Yukrayniga ah, isla markaana waxa la sheegay inuu markabkaasi hubinayay inaanay budhcadu ka dejiyaan wax hubka saaran ka mid ah iyo shaqaalaha saaran toona. Balse, shalay oo markabkaasi uu wax yar u jirsaday markabka afduuban lama sheegin wax taageero ah kamuu geysan isku-day lagu sii daayo, sidoo kalena wax xdhiidh ah lamuu yeelan markabka la afduubay shaqaalihii saarnaa iyo budcadda toona. Dhanka kale, iyadoo maraakiibta dagaalka ee Ruushka iyo Maraykanku gaaf-wareegayaan xeebaha Soomaaliya ayay budhcad-badeedu afduubeen shalay markab kale oo laga leeyahay dalka Giriiga. Kaas oo la sheegay inuu siday sunta kiimikada ah, balse lama kala caddayn suntaasi nooca ay tahay.
Dhawaaqyada caalamka & Budhcad-badeedda:
Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi ayaa welwel ka muujiyay qabsashada ay Koox Budhcad-Badeed ahi gacanta ku dhigeen Markabkan, isla markaana ku tilmaamay mid sii xoojinaysa qalalaasaha ka taagan Soomaaliya. Meles Zenawi oo ka hadlayay kulan uu shalay Magaalada New York ee dalka Maraykanka kula yeeshay Xoghayaha arrimaha Dibedda Maraykanka Mrs. Condoleeza Rice, ayaa qabsashada Budhcad-badeedku ay qabsadeen Markabka siday Saanadda Milatari ku tilmaamay mid xasilooni-darro ka abuuraysa guud ahaan Gobolka Geeska Afrika. Waxaanu walaac ka muujiyey awoodda sida xawliga ah u kordhaysa ee Budhcad-Badeedka Soomaalida. “Waxaanu aad uga walaacsanahay xadka Budhcad-badeedda ee Baddaha dusheeda, waxaanay la xidhiidhaan xasilooni-darrada Somalia.” Ayuu yidhi Meles Zenawi, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Waxay u adeegsan karaan (Budhcad-Badeedku Markabka) inay xasilooni-darro kaga abuuraan Gobolka. Guud ahaan xaaladda Baduhuna waa arrin wayn oo dhammaanteen ina khusaysa.” Ra’iisal-Wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay in tallaabo laga qaado arrintan Budhcad-Badeedda Soomaalida, isla markaana ay jawaab ka sugayaan Beesha Caalamka. “Waxaanu aad iyo aad u rejaynaynaa in Beesha Caalamku ka jawaabi doonto.” Ayuu yidhi Meles Zenawi. Afhayeen u hadlay Dawladda Kenya oo lahayd Saanadda Milatari ee uu Markabkani siday Mr. Alfred Mutua ayaa sheegay in Markabkan oo lagu magacaabo Faina aanu wali ku xidhan meel Deked ah, hase ahaatee uu heehaabayo Badda. Isaga oo sheegay in Dawladda Kenya aanay ka war haynin Madax-furasho ay Budhcad-Badeedda Soomaalida ahi dalbadeen. “Kenya kama war qabto wax madax-furasho ah oo ay doonayaan.” Ayuu yidhi Mr, Alfred. Budhcad-Badeedda Soomaalida ayaa sheegay inay Diyaar u yihiin waan-waan ay Dawladda Kenya kala galaan sii daynta Markabkan, isla markaana ay soo bixiyaan Lacagta Madax-furashada ah ee ay doonayaan. Hase yeeshee, Afhayeenka Dawladda Kenya u hadlay ayaa arrintaa dedafeeyay, waxaanu sheegay in waan-waan ay la galaan Budhcad-Badeeddu ay tahay dembi. “Kenya wax wada-xaajood ah lama gali doonto Dembiilayaal Caalami ah oo ah Budhcad-Badeedda iyo Argagaxisada toona.” Ayuu yidhi Afhayeenku.
Dhinaca kale, Wasiirka Difaaca dalka Ukraine Mr. Yuri Yekhanurov ayaa dhinacooda ka sheegay inay la socdaan halka uu ku sugan yahay Markabkani. “Waanu ognahay halka lagu hayo Markabkan” ayuu yidhi Wasiirka Difaaca Ukraine. Halka uu Wasiirka arrimaha Dibedda dalkaasi uu sheegay in ay ku dedaalayaan xallinta arrintan. Waxaanu xusay in Dawladda Kenya ay arrintan kala xaajoonayso Somalia, Ukraine, Ruushka, Maraykanka iyo Ingiriiska, si ay tallaabo uga qaadaan sidii loo sii dayn lahaa Markabkan la afduubay ee laga leeyahay dalka Ukraine.
Nin ay khadka talefoonka kula xidhiidhay AP siday faafisay oo sheegtay inuu yahay afhayeenka kooxda Budhcad-badeedda ah ayaa sheegay inay doonayaan lacag madax-furasho ah. “Waxaanu ka doonaynaa dawladda Kenya inay nagala xaajooto lacag ilaa $35 milyan oo Doollar ah oo sii-daynta Markabka iyo xamuulka saaran ah iyada oo aan wax farogelin ahi imanin,” ayuu yidhi ninkaas magaciisa ku sheegay Cali-yare Cabdiqaadir. Waxaanu intaa raaciyay, “Hadii aanay sidaasi imanin, waxaanu samayn doonaa waxa aanu awoodno, waananu ka dejin doonaa markabka hubka yar-yar oo aanu qaadanayno.” Cali-yare Cabdiqaadir waxa uu uga digay cid kasta oo isku dayda inay arrintan tallaabo ka qaado inay masuul iyagu ka yihiin khasaaraha ka dhasha. “Cid kasta oo isku dayda inay tallaabo aan ahayn ta aanu doonayno qaadaa, iyagaa ka masuul ah waxa dhaca.” Ayuu yidhi Cali-yare Cabdiqaadir.
Websaayd ay leeyihiin ciidamada Ruushka ayaa lagu faafiyay in Markab dagaal oo Ruushku leeyahay, kuna sugan biyaha Soomaaliya uu rakaal kula xidhiidhay markabka Yukrayn, isla markaana nin loo aqoonsaday inuu yahay kaaliyaha kabtanka markabkaas Viktor Nikolsky uu sheegay in afduubayaashu ay ka doonayaan lacag madax-furasho ah. Waxaanu shaqaalaha markabkaa saaran ku sheegay inay yihiin 35 qof, kuwaas oo 21 ka mid ahi ay yihiin shaqaalihii markabka, dhamaantoodna lagu xereeyay hal maqsin oo kuwa hiidka ah. “Ma jiraan cid uu dhaawac soo gaadhay oo markabka saarani, balse kabtanka markabka ayaa u il-daran xanuunka wadne-xanuunka, xaaladiisuna may wanaagsanayn,” ayuu yidhi ninkaa loo aqoonsaday Nikolsky. Hase ahaatee, warku ma kala cadayn xilliga dhabta ah ee wada-sheekaysigaas lala yeeshay markabka afduubani uu dhacay. Masuuliyiinta reer Ukrain ayaa iyagu sheegay in shaqaalaha markabkaa saarani yihiin 21 ay 17 ka mid ahi u dhasheen Ukrain, saddexna ay u dhasheen Ruushka iyo mid u dhashay dalka Latvia.
Mr Nikolsky waxa uu sheegay sida la faafiyay in markabkaasi uu xalay ku sugnaa meel u dhaw magaalada Hobyo, isla markaana wuxuu xusay in laba markab oo kale oo uu ku tilmaamay inay ugu muuqdeen kuwo la soo afduubay ay u soo dhawyihiin. Hase yeeshee, warar madaxbanaan oo ka imanaya dadka degaankaas ku sugan ayaa sheegaya in markabkaasi ku sugan yahay inta u dhaxaysa degaanka Hobyo iyo Xara-dheere oo ku yaala ee badhtamaha Soomaaliya.
Wajaale: Waraabe gadooday oo Meherad ganacsi la wareegay!
“Meherada Waraabaha oo keliya ayaa ku jira oo Sonkorta Miisaya” Taliyaha Saldhiga Wajaale
Wajaale (Ogaal)- Waraabe cadhaysan ayaa shalay la wareegay Dukaan ganacsi oo ku yaala magaalada Wajaale ee xuduudka Somaliland iyo Itoobiya.
Sida uu sheegay Taliyaha Saldhiga Booliska ee Wajaale Axmed Cabdi Daahir oo xalay Ogaal la soo xidhiidhay, Dhurwaagani waxa uu meheradaa ganacsi qabsaday abaaro 9:00 subaxnimo ee shalay. Waxaanu intaa ku daray inay Boolis ahaan dusha ka ilaalinayaan,subaxnimada Axadda maanta ay doonayaan inay talaabo ka qaadaan. “Dushaanu ka ilaalinaynaa Dukaanka Waraabaha oo keliya ayaana ku jira oo Sonkorta Miisaya,” ayuu yidhi Taliyuhu isaga oo kaftamaya.
Sidoo kale Maxamed Goodaad oo ah mulkiilaha meheradaa uu Waraabuhu galay oo xalay Ogaal wax ka waydiiyay arrinta ayaa sheegay in Dhurwaaga oo ay eryanayeen dadweyne badan oo reer Wajaale ahi uu Dukaanka nafta kula soo eertay, isla markaana aanu wax khasaare ah u geysan. “Walaal arrintu waxay u dhacday, Waraabuhu wuxuu ahaa mid ay muddo dadweynaha reer Wajaale magaalada dhinaceeda bari kasoo eryanayeen meheradana waxa uu usoo galay nabadgelyo ahaan. Meherada markaa waxa joogay wiil aanu walalo nahay, dabadeedna wuxuu is yidhi bal eeg waxa lagu qaylinayo, kadibna markii uu wiilku meherada ka baxay ayay Waraabaha albaabka ku kulmeen,” ayuu yidhi mulkiilaha Dukaanka Waraabuhu galay, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi; “Markiiba wuxuu si degdeg ah u galay Meherada, waananu kusoo qufulnay (xidhnay)sidiina wuu ugu jiraa. Markaa waxaanu doonaynaa in aanu caawa xilliyada dambe ka sii dayno meesha.”
Mar aanu sii waydiinay in Waraabuhu wax khasaare ah gaadhsiiyay Meherada iyo in kale, waxa uu ku jawaabay; “Wax khasaare ah u muu geysan meherada, waxaanu iska fadhiyaa dhinaca dambe ee Dukaanka.”
Mr Goodaad waxa uu sheegay in sababta ay Waraabaha ugu xidheen Meheradu ay la xidhiidho si uu uga nabadgalo dadweynaha markaa hore eryanayeen. Waxaanu tilmaamay inay dhacdadii ugu horeysay nooceeda ee soo marta dadweynaha reer Togwajaale.
Khasaaraha Weeraro Madaafiic ah oo Gilgilay Muqdisho
Muqdisho (Ogaal/W.Wararka) – Ciidamada Uganda ee ku sugan Soomaaliya ayaa duqeyn ba’an u geestay suuqa Bakaaraha iyo xaafado ku dhow dhow ee magaalada Muqdisho, ka dib markii weerar madaafiic ah loo geystay Diyaarad Milateri oo uga soo degtay Garoonka Diyaradaha ee magaalada Muqdisho.
Abaaro 11-kii iyo qadar daqiiqado ah ayaa waxa ku bilaabmay Suuqaasi iyo deegaanka ka ag dhaw, sida wararku sheegayaan madaafiic xoogan oo ka imaanayey ciidamada Amisom, kuwaas oo ka dhacayey qoryaha taangiyada, hoobiyeyaal iyo noocyo kale oo madaafiic ah.
Madafiicdii ugu horeysay oo u muuqday in lagu soo liishaamay meelaha ugu mashquulka badan suuqa Bakaaraha oo waqtigaaas u ka socday dukaameysi balaadhan ayaa si is daba joog ah ugu dhacay qeybaha Daawada, bacadlaha, qeybta raashinka iyo Cabdala shideeye, halkaas oo ka hor inta aan madaafiicdu soo bilaaban tirada dadka owgeed ay adkeyd in la maro balse daqiiqado gudaheed isku bedeshay wadooyin haawanaaya.
Midka mid ah madaafiicdaas oo ku dhacay qeybta bacaadlaha ee suuqa ayaa qudha ka jaray ilaa 5 qof oo ka mid ah dadkii ka adeeganayey sida ay faafisay idaacada Shabelle.
Madfac kale oo isna ku habsaday qeybta Raashinka ee suuqa Bakaaraaha ayaa galaaftay 2 kamid ah dadkii halkaasi joogay sida uu ku waramaayo goobjooge halkaasi kusugnaa wakhtiga weerarka madaafiicda ahi dhacay.
In kasta oo ay jiraan Wariyayaal sheegay inay arkayeen Tangiyada ciidamada Amisom oo ku sugan isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho oo madaafiic ku garaacaya suuqa Bakaaraha, hadana afhayeenka Amisom Brigye bo-huko oo arrikan wax laga weydiiyay ayaa ku dooday in aanay Taangiyada Ciidamadooda ee sugan Sayidku wax madaafiic ah ku ridin Suuqaasi.
Ka hor intii aanay ciidamada Amisom duqeyn suuq Bakaaraha ayaa dhowr madfac lagu tuuray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo waqtigaas ay soo caga-dhigatay diyaarad ay leeyihiin ciidamada Uganda, taasoo loo arrko in ay jawaab u ahayd madaafiicda lagu weeraray Suuqaas oo ay aaminsan-yihiin inuu gabaad u yahay kooxaha ka hor jeeda Dawlada Imbeghati.
Ciidamada Uganda ayaa mudo ka yar 10 maalmood oo ay duqeyn ka geysteen magaalada muqdisho waxaa ku geeriyooday dad ku dhow 70 qof halka inka badan 200 oo kalena ay kudhaawacmeen.
Gabiley: Tartankii Qur’aanka kariimka ah ee bisha ramadaan oo la soo gabagabeeyay
Gabiley (Ogaal) – Tartanka quraanka kariimka ah ayaa shalay loogu soo gabagabeeyay caasimada gobolka gabiley.
Xaflada balaadhan oo lagu gudoonsiinayay ardayda shahaadooyin iyo abaal marino kala duwan ayaa lagu qabtay masaajidka wayn ee masjidu Nuur ee magaalada gabiley
Xafladaasi waxa ka soo qayb galay xafladaasi, Sh. Cabdilaahi Cabdi Cali (Sh.kaawi), Sheekh Maxamed Khaashac, Taliyaha qaybta ee gobolka Gabiley, xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka Gabiley, Xubno ganacsato ah, macalimiinta iyo ardayda madaarista iyo marti sharaf kale.
Ugu horayn waxaa halkaasi ka hadlay Sh. Cabdilaahi Cabdi Cali (Sh.Makaawi) oo aad ugu mahadnaqay gudida soo qabanqaabisay munaasibada qiimaha leh ee ay ardaydu ku tartamayeen, iyo shirkadaha ka caawiyay kharashka iyo abaal marinta ardaydaba.
Sh.Makaawi waxa uu aad ugu dheeraaday qiimaha iyo fadliga uu leeyahay quraanka kariimka ahi waxaanu tusaaleyaal badan kusoo qaatay mucjisooyinka quraanka ku soo arooray, waxaanu sheekhu bayaamiyay inuu quraanku afayeen u noqonayo maalinta qiyaamaha qofka ku camal fala, sidaa la ajligeed looga baahanyahay ardayda inay dadaalaan oo ka faa,iidaystaan fursada qaaliga ah ee ay haystaan .
Sheekh C/laahi waxaa uu sheegay in muhiimada tartankani tahay uun in la soo saaro arday hufan oo quraanka xafidsan korna uqaada diinta islaamka.
Waxaa kale oo isna halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Gabiley Mudane Saleebaan Muuse waxaana uu taliyuhu ka hadlay qiimaha ay dhalinyarnimadu leedahay iyo in la ilaaliyo musqabalka dhalinta da’dayar si ay hadhawto u noqdaan dad la munaafacaadsado.
Waxaa kale oo iyana halkaasi hadalo waano iyo talooyin dhiiri galin ah isugu jira halkaasi ka jeediyay Abiib Xasan Filfil iyo Jamaal Siciid oo ah Maclin masri ah oo wax ka dhiga dugsiga sare Timacade secondry school.
Waxaana halkaa lagu gudoonsiiyay Shahaadooyin 62 arday oo 42 ka mid ahi ay yihiin rag 11-ka kalena ay yihiin Hablo, waxaana si gaar ah loo gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ku guulaysatay abaal marino iyo shahaadooyin gaar ah.
Waxaa ay kala ahaayeen 3-dii arday ee soddonka jis ugu sareeyay:
1-Cabdi-xakiim Xuseen Xasan, kaalinta koowaad
2- Maxamed Aw Daahir Duceeye, kaalinta labaad
3- Cadbilaahi Sh. Cabdi-raxman Cabdi kaalinta sedexaad Mustafe future
Saylada Xoolaha Alaybaday oo dib u camirantay 21′sanadood ka dib, Magaalada Allaybaday ayaa Todobaadyadan u danbeeyay ay ka muuqatay dhaqdhaaq Ganacsi oo xaga xoolaha ah oo ka duwan kii hore uga jiray.
Saylada Xoolaha ee Allaybaday waxay u muuqataa mid kusoo noqonaysa sideedii hore ka dib markii aanay wax ganacsi ah oo xoogani ka jirin laga soo bilaabo ilaa sanadkii 1987kii dabayaaqadiisii wakhtigaasi oo ciidamadii taliskii Siyaad Bare iyo Xoogagii SNM ay ku dagaalami jireen Magaalada Allaybaday iyo agagaarkeeda wakhtigaasi oo uu istaagay dhaqdhaaqii Saylada Allaybaday oo wixii intaasi ka horeeyay oo ahayd sideetamaadkii ahaan jirtay Saylad Istaraajiya oo xoolaha looga kala keeni jiray Bari iyo Galbeedba guud ahaan geeska Afrika goobaha Soomaalidu ka degto, sida ay ii sheegeen Odayaal wakhtigaasi ka ahaan jiray Dilaaliin xaga xoolaha ah. balse wixii dagaaladii ka danbeeyay ay noqotay Saylada Xoolaha ee Allaybaday mid Haawanaysa oo aanu ganacsi fiicani oo kii hore uga jiri jiray la mid ahi uuna kasocon. Haatanse, labadii todobaad ee ugu danbeeyay waxa laga dareemay dhaqdhaaq diiran oo xaga Adhiga damaanka ah iyada oo Lo’dana Ogaysiisyo labixinaayo ah siddii loo keeni lahaa saylada,taasi oo mar aan Booqday shalay saylada Allaybaday aan arkaayay Adhi fara badan oo xayn xayn loo keenayo saylada, adhigaasi oo mar aan waydiiyay Dilaaliintii iibinaysay ay ii sheegeen in ay ku iibinayaan qiimihii ugu sareeyay ee ay Adhi ku iibiyaan abid. qiimahaasi oo ay iigu sheegeen in uu u dhaxeeyo 330.000 s/l shilings ah ilaa 480.000 s/l shilings ah qiimayaashaasi oo u dhigma $52 ilaa $75.5 dollarka maraykanka ah, waxa kale oo aan waydiiyay dilaaliintii su’aal ahayd qiimaha intaa leeg maxaa ugu wacan in uu gaadho naafka adhi ahi? Waxana ay iigu jawaabeen “laba arimood ayaa labadaba u sabab ah waa takoowaad eh wakhtigani waa xiligii ciidal fidridu soo galaysay, markaasi waligeedba adhigu waa qaaliyoobi jiray inkastoo aanu qiimahan gaadhi jirin, talabaad waxa wakhtigii hore saylada wax ka iibsan jiray shaqsiyaad kooban kuwaasi oo dadka xoolaha baqsi jiray balse wakhtigan waxa ku jira Ganacsato badan islamarkaana ah kuwa siisanaaya xoolaha qiimahaasi fiican iyada oo uu isku eri ka jiro saylada taasina waa waxa keenay in ay xooluhu gaadhaan heerkan” Sidaas ayay iigu warameen.
Hadaba iyada oo lagu guda jiro todobaadkii u danbeeyay ee bisha barakaysan ee Ramadan ayaa aad arkaysaa kumanaan adhiya oo laga daabulaayo Magaalada Allaybaday adhigaasi oo ay daabulayaan gawaadhida waawayn nooca looyaqaano waaraado laba raaro ah iyo shaambooyo iyana laba raara, waxa iyana aan su’aal waydiiyay ganacsatada xoolaha iibsanaysay su’aashaasi oo ahayd Malaga yaabaa in aad sii wadaan wax ka iibsiga sayladan Allaybaday mise waxa uu wax iibkiinu ku koobnaan doonaa xiligan ciida? waxayna iigu jawaabeen waxa noo qorshaysan in aanu Sayladan wax ka iibsano balse waxa aanu ka walaacsanahay halka aanu daajin doono xoolahaasi, maadaama oo aanay xiligani jirin dhulkii qadawga xoolaha loo daaqgayn jiray siddii wakhtigii hore oo meel walba qof sheeganaayo
Hadaba iyada oo mar kasta ay lagama maarmaan tahay in dhulkii qadowga la odhan jiray ee dadku wada lahaayeen oo imika ah Beero dad sheeganaayo in la gadbo, hadana su’aasha mudan in la iswaydiiyaa waxa ay tahay Maamulka Degmada Allaybaday ma dhaqan galin doonaa Wareegtadii ay Wasaarada Arimaha guduhu soo saartay ee ay ku gadbaysay dhulkaa qadawga sannadkii hore 2007 ? ISMAIL ABDI MUXUMED (Hilqad)
Obama oo ku guulaystay dooddii wareega koowaad
Oxford, Mississippi (CNN/Ogaal)- Afti codayn ah oo laga qaaday dalka Maraykanka oo dhan dadkii daawanayay dooddii koowaad ee madaxweynenimo, ayaa lagu soo jeediyay inuu Musharrax Barack Obama kaga horeeyo ninka ay u tartamayaan jagada madaxweynenimo doorashooyinka guud ee dalkaas bisha Nov 2008.
Inkasta oo sida la sheegay Barack Obama uu saaxiibkii ka horeeyo, hadana waxa si balaadhan laysugu raacsan yahay in labada nin ee Obama iyo John McCain ay awoodi doonaan qabashada masuuliyada ay tartanka u galayaan ee madaxweynenimada Maraykanka hadii loo doorto. Fikir ururin uu sameeyay taleefishanka CNN ayaan ahayn mid cabiraad buuxda ka bixin karta aragtiyaha dadka Maraykanka ah oo dhan, maadaama dadkii dooddaas daawanayay oo keliya wax laga waydiiyay, isla markaana ay isugu jireen tageerayaasha Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuquraadigaba. Ilaa 51% ayaa dadkii wax la waydiiyay aaminsan in Barack Obama uu kaga guulaystay dooddii Jimcihii Mr McCain, halka 38% ay sheegeen inuu John McCain kaga wanaagsanaa Obama. Ragga codaynta laga qaaday ayaa ugu dhawaan kala reebay labada musharrax, kuwaas oo 46% ay codkooda siiyeen McCain, halka 43% ay codkooda ka siiyeen Obama. Hase ahaatee, haeenka codkooda dhiibay ayaa meel sare gaadhsiiyay Mr Obama, kuwaasoo 59% ay ugu yeedheen Obama inuu yahay ninka doodaa ku guulaystay, halka 31% ay ka doorbideen inuu John McCain ka guulaystay. Ilaa 20% dadkii dooddaas la socday ayaa sheegay in labada musharraxba ay aad uga liiteen wixii laga filayay inay dooddaas ku soo bandhigaan. Sidoo kale, inka badan saddex-meelood laba meelood dadkii daawanayay dooda ayaa isku raacay inay labada ninba awoodaan hanashada jagada madaxweynenimo hadii loo doorto. Su’aashii laga waydiiyay amaanka qaranka Maraykanka ayaa u muuqatay inuu ka faa’iidaystay McCain oo helay 49%, halka Obama-na 45%, taasoo uu musharraxu ku fiicnaan lahaa inuu helo 4.5%. Arrinta dhaqaalaha Maraykanka oo haatan maraysa halkii ugu xumayd ayaa ahayd meel uu Obama aad uga weerarayay McCain, isla markaana dooddaas hadhaysay qaybteedii hore oo dhan. Dadkii daawanayay ayaana siiyay 21% dhibcood inuu su’aashaa ku helay, taasoo ka dhigtay inuu helo 58%, halka McCain ka helayo 37% qadiyadda dhaqaalaha. Sidoo kale, tiro taasoo kale ah ayaa ugu codaysay Obama inuu yahay ninka xilligan ku wanaagsanaan lahaa xaaladdaha qalalaase ee dhaqaalaha. Si kastoo ay ahaydba, warku wuxuu sheegay in dooddaasi aanay ahayn mid ka tarjumaysay kala horayn dhab ah oo labada musharrax si balaadhan loogu kala saari karayay. Hase ahaatee, “Tijaabada dhabta ahi waxay soo baxaysaa dhawr maalmood ka dib hadii markaa taageerada Obama ama McCain isbedesho, ka dib marka codayn laga qaado dhamaanba cod-bixiyeyaasha, balse maaha oo keliya dadkii daawanayay dooddaas,” sidaa waxa yidhi guddoomyaha xafiiska cod-qaadista Taleefishanka CNN Keating Holland.
Source: Xaunta Wargeyska Ogaal, Hargeysa.